उच्च नदी, प्रकृति र फुटेज | Absolut यात्रा
मारुउजेन | 28/06/2021 14:08 | अद्यावधिक गरियो 28/06/2021 15:09 | क्यानाडा
कानाडा यो एक यस्तो देश हो जुनसँग अद्भुत परिदृश्य छ, विशेष गरी यदि तपाइँ तालहरू, पहाडहरू, नदीहरू र ज with्गलको साथ ताल पोस्टकार्डहरू मन पराउनुहुन्छ। विशेष गरी सुन्दर परिदृश्य हो उच्च नदी.
उच्च नदी क्याल्गरी शहरबाट करीव Cal 54 किलोमिटर टाढा अल्बर्टा क्षेत्रमा एक समुदाय हो र यो धेरै प्रसिद्ध छ किनकि यहाँ छ धेरै टिभी श्रृंखला र चलचित्रहरू चित्रित गरिएको छ। यो सहि छ, उच्च नदीमा प्रकृति र फिल्मांकन छ।
1 उच्च नदी
2 उच्च नदीमा हार्टल्याण्ड टूर
यो शहर को माध्यमबाट पार हुने नदीको लागि नाम हो। पहिलो युरोपेली बसोबासहरू १ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइपुगे, ट्रेनको विस्तारको साथ हातमा अलि अलि गर्दै विकास गर्दै, तर यसले पहिलो विश्वयुद्धको समयमा वास्तविक प्रगति अनुभव गर्यो। त्यसबेला उद्योग स्थापना भएको थियो।
भाग्यवस, यस विकासले यसको प्राकृतिक वातावरण र विशेष वातावरणको सौन्दर्यलाई छाया दिँदैन "सानो सहर" कि उसले उनलाई कहिल्यै छाडेको छैन। तपाईं क्षितिजमा रकीज देख्न सक्नुहुनेछ, र त्यो, तपाईं मुश्किलले करीव शहरबाट आधा घण्टा ड्राइभ गर्नुभयो।
वास्तवमा आज कार्गारीबाट पर्यटनहरू यस सुन्दर साना शहरमा आयोजना गरिएको छ जुन asहार्टल्याण्डको घर », ठीक किनभने किनभने यो सबैभन्दा लोकप्रिय सीबीसी श्रृंखला को फिल्मिंग स्थान हो: हार्टल्याण्ड।
हार्टल्याण्ड एक श्रृंखला हो जुन उच्च नदीलाई लोकप्रिय बनाउँदछ। श्रृंखला एक देश परिवारको जीवन वरिपरि घुमाउँदछ, यसको उतार चढाव कृषि, परिवार र हृदय कार्यहरूमा। यो एक सीबीसी शो हो सबैभन्दा लामो चलिरहेको र फिल्मांकन क्याटलरीको सेट हार्टल्याण्डको खेत-स्टुडियोको बीचमा विभाजित छ।
उच्च नदीमा हार्टल्याण्ड टूर
हामीले पहिले भनेजस्तै, उच्च नदी क्यालगारीबाट आधा घण्टा मात्र छ कि त तपाईं एक यात्रा भाँडामा वा तपाईं आफ्नै मा जानुहोस्। यो फिल्मांकन मे देखि डिसेम्बरको सुरूमा हुन्छ र जब टिभी मानिस आइपुग्छ, सबै परिवर्तन हुन्छ। सानो कथा कथन समुदाय टेलिभिजन गतिशील मा प्रवेश गर्दछ।
हार्टल्यान्ड फ्यानहरूले हडसन यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ यसका लागि हाईवुड म्यूजियम। आगन्तुक सूचना केन्द्रले यो संग्रहालय भित्र काम गर्दछ र सबैलाई फिल्मांकनको बारेमा थाहा छ ताकि तपाईं लाभ लिन सक्नुहुनेछ र श्रृंखलाको बारेमा उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। संग्रहालय पछाडि पार्क पनि छन् ट्रेलर त्यसोभए यदि फिल्मांकन छ भने तपाईं केहि रोचक गतिविधि देख्नुहुनेछ।
साथै, संग्रहालय आफ्नै अधिकारमा विचित्र छ किनकि यसले पुरानो, ऐतिहासिक क्यानाडाली प्यासिफिक ट्रेन स्टेशन भित्र कार्य गर्दछ। र यो पनि चाखलाग्दो छ किनकि त्यहाँ प्रदर्शन छ जुन हार्टल्याण्डमा मात्र केन्द्रित छैन तर अन्य चलचित्रहरू वा श्रृंखलाहरूमा पनि यस क्षेत्रमा फिल्म गरिएको छ। फार्गो, द रेभिएन्ट वा अनफोर्जिव
हार्टल्याण्डमा आगन्तुकहरूले श्रृंखलाको धेरै पोशाक र इतिहासका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू पनि देख्न सक्छन्, जस्तै 7. मौसमबाट गुडिया घर। साथै, सबैभन्दा कट्टरपन्थीहरूका लागि, त्यहाँ प्रश्न र उत्तर खेल छ जुन उनीहरूलाई प्रमाण दिन्छ। र निस्सन्देह, त्यहाँ उपहार पसल छ जहाँ तपाईं बेसबल टोपी, अखबारहरू, क्रिसमस रूखहरूको लागि सजावट र अधिक किन्न सक्नुहुनेछ।
संग्रहालयबाट एक ब्लक हो वाकरहरू पश्चिमी पोशाक, यो कहाँ बेचिन्छ श्रृंखला को आधिकारिक मर्चेंडाइजिंगजस्तै स्वेटशर्ट्स, टी-शर्ट वा क्यालेन्डरहरू। अर्को स्टोर ओलिभ र फिन्चामा, तिनीहरू आईफोन केसहरू सहित श्रृंखलासँग सम्बन्धित चीजहरू पनि बेच्छन्। यो स्टोर तेस्रो एभिन्यूमा छ र यो धेरै सडक जहिले पनि टेलिभिजन इतिहासमा देखा पर्दछ, त्यसैले कोही यसको केही अंश महसुस गर्दछ ...
यो सडकमा पनि छ म्यागी डिनर, el खाने श्रृंखला को। स्पष्ट रूपमा, यो वास्तविकको लागि होईन, तर तपाईं सँधै काँचको बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ र सेट र यसको जटिल अपरेशनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को ढोका बार्टिलि and र सन्स मर्कन्टाइल र हडसनको एन्टिक मल्ल पनि हो र भ्यान बोर्न ट्राभल एजेन्सी पछाडि यसको आकर्षक विन्डोको साथ फोटो खिच्नको लागि आदर्श हो। सडक पार हडसन टाइम्स कार्यालयहरू छन् र तिनीहरूले नि: शुल्क अखबारहरू वितरण गर्छन्।
एउटा थप ब्लक चौथो एभिन्यू हो। यहाँ छ कोलोसीको कफीe, भनिला र कारमेल सिरपको यसको कारीगर निर्माणसँग। उनीहरू भन्छन्, खुशी छ। क्याफेटेरियाको बाहिरी पर्खाल बाहिरका ब्ल्याकबोर्डको रूपमा चित्रित गरिएको छ जसले गर्दा तिनीहरूको स्मृति त्यहाँ छोड्न सकिन्छ। क्याफेको छेउमा एभलीनको मेमोरी लाइन छ, यो विचित्र सानो पट्टी हो जसले स्वादिष्ट आइसक्रिम र स्यान्डविचलाई धेरै रेट्रो डेकरको साथ सेवा गर्दछ।
पछि, हो, अधिक सडकमा हिंड्नको लागि बाहिर जाने समय हो। केहि बिन्दु मा हाम्रो कदमहरु हामीलाई मा नेतृत्व गर्नेछन् जर्ज लेन पार्क, स्थानीय हाई स्कूलले उनीहरूको स्नातक समारोह आयोजित गर्न छनौट गरेको साइट, टिभी श्रृंखलामा पनि देखा पर्दछ। पार्कमा राम्रो ग्याजेबो र एक अंश छ जसले शिविर क्षेत्रको रूपमा काम गर्दछ जहाँ तपाईं मे १ देखि सेप्टेम्बर from० सम्ममा पाल टाँग्न सक्नुहुन्छ।
पार्कबाट बाहिर जाने सडक 5th औं एभिन्यू हो र यसको अन्त्यमा, ऐतिहासिक वेल्स थिएटरको ठीक उल्टो हो, हो उच्च नदी मोटर होटल। एउटा सानो र धेरै क्लासिक मोटल जुन दुबै हामीले हेर्दै गरेका चलचित्र र फिल्ममा देखा पर्दछ फुबर। फोटो लिनका लागि यो मूल्यवान छ।
जे होस् उच्च नदी मनोरन्जन उद्योगमा भारी प्रयोग गरीन्छ, फिलिमिंगको एक ठूलो प्रतिशत मिल्लरभिलको पश्चिमतिर एक भागमा गरिन्छ। यो निजी स्थान हो त्यसैले तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुन्न, तर मिलरभिल, यो अन्य शहरको पनि यसको इतिहास छ, र यसैले यसको आफ्नै स्थानहरू, सिनेमा र टेलिभिजनसँग सम्बन्धित।
उच्च नदी र हार्टल्याण्ड एकमा फर्कदै सवारी नगरी छोड्न सक्दैन। टिभी श्रृ horses्खला घोडाहरूको वरिपरि घुम्छ त्यसैले अलि धेरै प्रयोग नगरी छोड्न असम्भव छ। त्यसैले हामी केहि घोडा सवारी गर्न सक्छौं र हुन चरवाहे केहि समयको लागि। एch्कर डी आउटफिटि Ran खेतले घोडामा सवारी र केबिन भाडा प्रदान गर्दछ।
यी सवारीहरू दिनको दुई पटक, प्रत्येक दिन, वयस्क र छ वर्ष र माथिका बच्चाहरूको लागि हुन्। यस पदयात्राले काउबॉय जीवनको परिचयको रूपमा सेवा गर्दछ तर साथै सुन्दर प्रकृति पनि जान्नका लागि जुन उच्च नदीको वरिपरि छ, रकीज।
त्यसोभए यदि तपाइँ क्यानडा जानुहुन्छ वा यदि तपाइँ यस लोकप्रिय शृंखलालाई अनलाइन पछ्याउँनुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँ यसमा एक ठूलो यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ विचित्र क्यानाडी शहर।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » उच्च नदी, प्रकृति र फुटेज